Posted on September 12, 2019 September 13, 2019 by Salokya
यो फोटो सम्झनुभएको छ ? १८ वर्षअघि आज अर्थात् सेप्टेम्बर ११ का दिन वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आ तंकवा दी आक्रमणपछि त्यो गगनचुम्बी भवनबाट हाम्फाल्दै गरेको फोटो हो यो। फोटो पछाडिको कथा झन् रोचक छ, फोटो खिच्ने फोटोग्राफर आफै एउटा इतिहास हुन्, आलोचना पनि चर्को खेप्नु पर्‍यो यो फोटोले, हाम्फाल्ने को हो भनेर पत्ता लगाउन पत्रकारहरुलाई कति गाह्रो भयो, यो सब इतिवृत्तान्त एसक्वायर म्यागेजिनमा सन् २००३ मा प्रकाशित भएको थियो। यहाँ त्यसैको केही प्रमुख अंशको अनुवाद राखिएको छ।
सबैभन्दा पहिले सी एन एन मा समाचार देख्दा पहिले त् मैले कुनै सिनेमाको सुटिङ्ग होला भनेर सम्झेको थिए तर त्यो त् बास्तबिकता रहेछ. खासै अंग्रेजी राम्रो नबुझ्ने भएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ.